Kajy, kajikajy, paika, paipaika | NewsMada
Kajy, kajikajy, paika, paipaika
Par Taratra sur 02/11/2017
Tena havanana amin’ny fanaovana kajy, kajikajy raha ny marimarina kokoa, ity fitondrana HVM ity. Mahay fanorona koa e… Paika, teti-panorona. Angaha namelan-dry zalahy raha tsy tanteraka ny tetika. Tonga eo amin’izay niriany izy izao dia ny fahazoana ny sezan’ny filohan’ny Antenimierandoholona. Miampy indray izao ny hery… hery politika eo am-pelatanany. Raha izao fandehany izao, tsy hijanona hatreo izao kajikajy izao. Efa mazava, miharihary ny tanjona. Tsy olana intsony na hametra-pialana alohan’ny fotoana aza ny filoham-pirenena. Iny ihany mantsy no efa nampisahotaka azy ireo, teo alohaloha teo. Izao, milamina ny raharaha. Efa ny zanaka an-trano mihitsy izao no hitantana ny baolina rehefa ho tonga ilay fotoana.
Fa ity filohan’ny Antenimierandoholona teo aloha no mba nahavariana, nahagaga ny maro. Niala, nefa tsy noesorina, tsy nanala-tena. Inona koa izao no dikan’izany ? Mihevitra ny vahoaka ho ”paiso”. Mahay miteny, mandamin-dresaka. Miharihary koa ny fahaizan-dRangahy io kajy… kajikajy. Nifindran’ny aretin’ny sasany ? Resaka fotsiny no betsaka, fa noterena hametra-pialana no marina. Iza no mahita, mety efa nandray ”S”, araka ny fitenin-jatovo koa aza. Tsy izy irery fa mety ho ireo loholona maro an’isa HVM ao amin’ity andrimpanjakana ity mihitsy koa aza. Efa malaza eny amin’ny antenimiera roa tonta hatramin’izay mantsy ny fisian’izany… ”mallette” izany.
Tsy kajy fa kajikajy, tsy paika fa paipaika no manavanana ny mpitondra sy mpanao politika eto amintsika. Hafetsena, vokatry ny fitiavan-tena, fitiavan-tseza, fitiavam-boninahitra… Ny firenena sy ny vahoaka anefa ity, izao iaraha-mahita izao : miaina ao anatin’ny fahantrana mangitsokitsoka. Raha tsy maty lanahan’ny aretina, velona mitsipozipozin’ny fahasahiranana lalina.